Kaalmada guri ku xanaaneynta ilmaha - InfoFinland
Nolosha Finland > Qoyska > Kaalmada dhaqaale ee qoyska > Kaalmada guri ku xanaaneynta ilmaha
Inta badan aabaha ama hooyada ayaa ilmaha ku haya guriga ugu yaraan waqtiga fasaxa waalidka, ilaa ilmuhu ka gaarayo 9 billood. Fasaxa waalidka kadib ilmuhu waxay aadi karaan xannaanada ama labada waalid midkood ayaaku heyn kara ilmihii guriga. Ka aqri faahfaahin dheeriya xannaanada bogga InfoFinlandi Barbaarin-horaadka.
Kaalmada guri ku xannaaneynta
Haddii aad ku heyso ilmo ka yar 3-jir, waxaad Kelada ka codsan kartaa kaalmada guri ku xannaaneynta. Xannaaneeyahu wuu ahaan karaa xanaaneeye ama ruux ehelka ah. Ma heleysid kaalmada guri ku xannaaneynta haddaad wadanka dibadiisa joogto. Weydii faahfaahin dheeriya Kelada.
Keladu waxay bixisaa kaalmada guri ku xannaaneyn haddii
mid ama labada waalid ah Guri degmo ku leedahay Finland ama
ugu yaraan labada waalid midkood uu ka shaqeeyo Finland islamarkaasna uu ku jiro shaqadaas darteed Ammaanka bulshada.
Kaalmada guri ku xannaaneynta waxaa kamid ah lacagta xannaaneynta iyo dakhliga qoyska dheeraadka xannaaneynta ee ku xiran iyo weliba dheeraadka degmada oo suurtagal ah. Weydii xafiiska sooshalka in degmadaada laga bixiyo dheeraadka degmada. Lacagta xannaaneynta ee kaalmada guri ku xannaaneyhntu dadka oo dhan waa u siman yihiin, dakhliga qoysku saameyn kuma yeesho.
Kaalmada guri ku xannaaneyntu waa dakhkli canshuur laga goynayo.
Kaalmada guri ku xannaaneynta waxaa xaaladaha qaarkood marka lagu jiro la siin karaan xubin kamid ah qoyska oo jooga wadan Midowga Yurub ama ETA ah. Faahfaahin dheeraad ah weydii Kelada.
Haddii aad ilmaha ku xannaaneyneyso guriga, waxaad xaq u leedahay inaad shaqada fasax mushaar la’aan ka gasho, ilaa ilmahaagu ka gaarayaan saddex sano. Xiliga fasaxa xannaaneynta ilmaha waxaad Kelada ka codsan kartaa kaalmada ku xannaaneynta guriga.
Waad geli kartaa fasax xannaaneyn, haddii aad markaas u shaqeyneysey shaqo bixiye isku mid ah ugu yaraan muddo 6 billood sanadkii ugu danbeeyey. Wargeli shaqo ku siiyahaaga ugu danbeyn 2 billood ka hor fintaadan gelin asaxa xannaaneynta.
Fududdeynta iyo qeyb lacagta xannaaneynta.
Fasaxa xannaaneyntu wuxuu noqon karaa sidoo kale mid waqtiga barkiis ah. Markaas waxaad sameynaysaa waqti shaqo o ka gaaban kii hore, taas bedelkeedana waxaad heleysaa mushaar ka yar kii hore.
Kelada ayaad ka codsan kartaa lacagta fududdeynta xannaaneynta (joustava hoitoraha) xannaaneynta ilmaha ka yar 3 -jirka iyo lacagta u fududdeynta xannaaneynta barka ah (osittainen hoitoraha) iyo kan ku jira fasalka 1aad iyo 2aad xannaaneyntooda haddii aad Guri degmo ku leedahay Finland. Fududdeynta ama lacagta xannaaneynta barka ah laguma heli karo cunugga buuxiyay saddex sano laakiin aan weli ku jirin iskuul. Ilmaha ka yar 3 sano waad ku ahaan kartaa adigoo helaya fasaxa lacagta u fududdeynta barka ah wakhtiga qaar xannaaneynta xannaanooyinka degmada.
Waad codsan kartaa fududdeynta ama lacagta xannaaneynta barka ah haddii aad waqtiga shaqadaada ee caadiga ah aad ugu badnaan ku gaabineyso 30 saacadood todobaadki xannaaneynta cunugga darteed. Hooyada iyo aabuhu waxay isku waqti heli karaan fududdeynta ama lacagta xannaaneynta barka ah haddii ay labadoodu yareynayaan waqtiyada shaqadooda islamarkaasna ay cunugga xannaaneynayaa waqtiyo kala duduwan.
Lacagta daryeelka waxaa markiiba laga bixiyaa hal cunug, waana lacag in la canshuuro mudan. Ma heli kartid fududdeynta ama lacagta xannaaneynta barka ah, haddii lagu siiyo lacagta waalidnimada ama gunnada guri ku-haynta caruurta, oo isla markaasna aad adigu ilmaha haysatid.